MAHERY AMIN'NY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA | FJKM Amboniloha
Finaritra ry Mpamaky malala,
“Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo”.( Filipiana 1:2)
Miarahaba ny Fiangonana sy ny mpianakavin’ny finoana manerana ny Nosy sy ny any am-pita velonaina tram-pamonjena noho ny fahasoavan’ny Tompo. Hono ho aho, efa nosaininao ve hoe raha avy tokoa moa ny Tompo anio, moa hahita ahy miambina, tena miaina ao anatin’ny finoana Azy, mifandray Aminy amin’ny alalan’ny vavaka satria efa fiainako izany?
Amin’izao vaninandro iainantsika izao dia tena manentana anao aho tena hahery hivavaka tokoa fa tsy ho variana amin’ny fombafomba ivelany ihany. Mampieritreritra ny tononkiran’ny mpanakanto iray izay milaza fa malaza ho maro mpivavaka eto Madagasikara ary tena hipoka mpivavaka ny Fiangonana rehefa misy ny fiaraha-mivavaka ny Alahady na Asabotsy. Mahagaga anefa fa toa mihamitombo ny faharatsiana ary ny firenena amin’ny ankapobeny dia miha miroso hatrany amin’ny fahantràna. Raha ambara tsotra dia “marary” ny firenentsika. Izao anefa, raha tena “mahery amin’ny vavaka” ny mpino dia ho sitrana ny tanintsika, “hiadana sy ho finaritra” ary tena ho “sambatra” araka ny hiram-pirenentsika. Toky tsy mamitaka ny Tenin’Andriamanitra: “Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny” (2Tantara 7, 14)
Iaino ary ambarao amin’ny mpiara-mivavaka rehetra àry fa takian’Andriamanitra amintsika ireto toetra sy fiaina ireto rehefa mivavaka ary dia tanteraho izany ho Voninahitr’Ilay Mpamonjy antsika
Manetre tena eo ambany tana maherin’Andriamanitra fa aza miavonavona ( Ohabolana 3, 34 ; 1 Petera 5, 5)
Ny tavan’Andriamanitra no tadiavo rehefa mivavaka fa tsy olombelona na zavatra hafa ( namana, fisehosehoana na voninahitra, vola , harena…) ary amin’izany dia tena manompoa Azy amin’ny fifaliana amin’ny fonao, ny herinao, ny sainao, ny fanahinao rehetra eny amin’izay maha izy azy anao rehetra e !
Ialao ny ratsy fanaonao eo amin’ny fiainanao andavan’andro (izay rehetra manohitra ny didy 10 io cf Deoteronomia 5, 6-10).
Aza mihatsaravelatsihy fa aoka hiaina amin’ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiava-namana araka ny sitrapon’Andriamanitra ianao ho fehin’izany.
“ raha avy ny Zanak’olona, moa hahita finoana ety ambonin’ny tany va Izy? (Lioka 18, 8)
Mino aho fa hahita finoana Izy satria ianao dia tena handray andraikitra tokoa ianao ka ho vavolombelony ary tena hiaina amin’ny finoana sy hifandray Aminy tsy mitsahatra na inona na inona miseho. Diniho ny Soratra Masina hampahery anao fa izay nahery nivavaka toko dia nahazo valimbavaka araka izay niriny avy amin’ny Tompo (vakio, ohatra, 1 Samoela 1, 18-29: Lioka 18, 1-8 …)
Mifampivavaha mba ho sitrana hianareo.
Ny fiasàn’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra” (Jakoba 5, 16b)
“Fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva…ka tsy reraka” (Lioka 18, 1)
Catégories :	Editorial, Vaovao	/ par AnjGab 19 novembre 2017